Ọrụ Shoring Na Wuhu Railway Station Anhui Province
site ha na 20-07-31
Wuhu Railway Station, nke nwere mpaghara 50,000 m2, bu ọdụ kachasị na ọdụ Nanjing ruo Anqing Inter-city Railway n'ime mpaghara Anhui. N'ime oru a, a na-asọpụrụ Rapid Scaffolding iji weta sistemụ sistemụ ya dị ka ịkwanye, n'okpuru nnukwu osisi nke 2.2 × 2.4m, na-eji 0.9 × 0.9m ...
Shoring System na Formwork Of Hong Kong- Zhuhai-Macau Bridge
Hong Kong-Zhuhai -Macau Bridge bụ ihe owuwu na-aga n’ihu nke nwere usoro akwa, tunnels na agwaetiti artificial nke ga-ejikọ Hong Kong, Macau na Zhuhai. Anyị e mere usoro scaffolding na formwork na-asọpụrụ ga-eji na otu nke isi agwaetiti - West Ar ...
Egwuregwu Beijing Olympic Otu Afọ Agụọ Omume Guzosie
Ọ bụ emume ngụkọta afọ maka Beijing Olympic Games na August 8th, 2007. Ndị ọrụ IOC na ndị nnọchi anya si mba na mpaghara 205 na-aga mmemme ndị a na-eme. Companylọ ọrụ Rapid Scaffolding nwetara nkwụnye iwu site na Beijing Olympic Games Opening and Closing Operation Center about ...
'Slọ ọrụ Taiwan's Formosa Plastics Corporation
Scaffolding Rapid Ji Dị Ka Ọrụ Na-arụ Ọrụ na Asia Symbol Factory
Ulo akwukwo nke abuo nke Asia Symbol bu uzo kachasi emeputa ihe n 'uwa. Ha kwesiri idozi ulo oru ha kwa afo dika ihe nlere. Ezigbo Scaffolding wetara ihe maka ọrụ ya, ọ were naanị awa 24 iji wuchaa ihe eji arụ ụlọ ...
Shoring Scaffolding Na Formwork N'ihi na National Ngosi na Mgbakọ Center (Shanghai)
Na ebe nke ihe dị ka 855,946.8 square mita. Otutu Scaffolding malitere China Expo ngosi formwork oru ngo (North Block) EPC Engineering (Nkebi nke abụọ). C1 16m nnukwu ụlọ nzukọ ebe formwork sub-oru ngo. Mpaghara C1 na ala kachasị elu nke ala 5 na ngụkọta ụlọ dị elu nke 32m, Ti ...
Nantong Sport Convention na Ngosi Center
October 15, 2006, 16th egwuregwu egwuregwu nke Jiangsu Province na mgbede show ẹkenịmde ke Nantong Sport Convention na ngosi Center. Nantong Sport Convention na Ngosi Center aha dị ka "South Chinese mba ama egwuregwu", ngụkọta ego bụ 2200 Nde RMB, ọ bụ aka n'ámá egwuregwu nke na-eji hu ...
Shoring Formwork Maka Nanjing Metro
Ezubere ọdụ ụgbọ oloko Nanjing dị ka 2-bay na ọdụ ụgbọ elu 2-storey dị n'okpuru ala. Isi ụlọ nke okpuru ulo abụọ bụ 6.28m, na otu onye bụ 4.85m. A na-ewu usoro isi ọdụ ụgbọ ahụ site na iji usoro ịkpụghe emeghe, yana 2-bay na 2-storey n'okpuru igbe igbe. Na dimensio ...
Nanjing Lukou International Airport airfield channel project (ngalaba F1-3), nke dị na ndịda ọhụụ ọhụrụ, ihe dịka 796m n'ogologo, nke nwere igbe okpukpu abụọ a na-atụgharị oghere na ụzọ izugbe. Oke dị elu bụ 9.8m. Usoro nke abụọ nke mmeba nke ọkpụrụkpụ bụ 1100 mm. Disk mkpọchi ígwè ...
Nanjing Archives Ọrụ Ntanetị
Nanjing na-edekọ ala dum nke 6666㎡, ngụkọta ihe owuwu nke 40796 layers, ọkwa itoolu na ala, okpukpu abụọ n'okpuruala, ebe a na-edebe ihe owuwu ụlọ nke elu 37.25 m, nzọụkwụ asatọ ka elu ọhụụ atọ nke eriri igwe, asatọ larịị bụ + 29.45 m. Ihe oru ngo a di ...
Arụ Ọrụ Platform Of Chengxi hipgbọ mmiri
Jiangyin Chengxi shipyard Co., Ltd jiri RS Octagonlock mee ka ikpo okwu na-arụ ọrụ n'ime ma n'èzí ụgbọ mmiri ahụ. Ebumnuche nke ụgbọ ahụ dị mgbagwoju anya, yabụ RS na-ebelata ogologo litger na cantilever akụkụ ụfọdụ nke scaffoldiing. 1. Tụnyere erection, RS scaffolding azọpụta ọtụtụ ọrụ. 2. Ọ bụrụ na-eji ...
2014 Nke 26 Iaf World Cup Race Walking Guzosie
2014 Igu nke iri abụọ na isii IAAF World Cup Race Walking guzoro bidoro site na Mee nke ato rue Mee nke ano, ihe dika ndi n’egbo-egwuregwu 360 si mba iri anọ na asatọ na-aga ọsọ ahụ.